Wasiirka Turhan Oo Ka Qayb Galay Iftar Agaasimaha Guud Ee Wadooyinka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraWasiirka Arimaha Gudaha Oo Ka Qeyb Galey Idaacadda Agaasimaha Guud ee Wadooyinka
11 / 05 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, WADADA, Headline, TURKEY
Turhan ayaa ka soo qaybgalay iftarina dadweynaha
General Directorate of Waddooyinka by munaasabadda cashada afurka Ramadaan qabtay la Gaadiidka iyo Kaabayaasha Wasiirka M. Cahit Turhan, Maareeyaha Guud Abdulkadir Waddooyinka iyo Waddooyinka URALOĞL goob joog ka ahaa xubno ka tirsan Ururka.
Imaatinka caanka ah ee bilaabay akhrinta Quraanka, wasiirka TURHAN iyo Maareeyaha Guud URALOĞLU wuxuu xoojiyay muhiimada bisha Ramadaan ee hadalka.
Uraloglu wuxuu sheegay in bisha Ramadaan uu ahaa bil gudaheed oo dareen diimeed la kordhiyay iyo dareenka naxariis darrada ayaa la kordhiyay.
Wasiirka Turhan sheegay in nabadda iyo degganaanshaha shirwaynaha, walaalahana iyo kow iyo toban bilood dhaafto xadka midnimo dareen Suldaanka leexdaan Ramadan ogaaney wax isaga ka farxiya inuu la kulmo ee casho afurka isla xubnaha Waddooyinka maqli kibirka in uu xubin ka yahay qoyska.
Waddooyinka in ay tahay qoyska weyn ee Ururka ilaa TURHAN, isagoo qoyska ma fududa, isagoo sheegay in ay tahay khasnaddiisa gaar ah "midba midka kale ka dhan ah haddii aan muhabbetimiz oo midba midka kale ka miyaanan tamarta this si looga fogaado samaynaya dhammayn karaa shaqo weyn," ayuu yiri. Marka hore Marka hore, waxaan aaminsannahay naciflikka qaranka iyo waddankeena, si kale haddii loo dhigo, midabkiisa, weynaanta iyo quruxda. Taasi waa sababta oo ah waxaan aaminsanahay iyaga, waxaanan qabannaa shaqadayada jacaylka cibaadada. Caqiidadeena, waa sadaqo si looga saaro dhagaxa ka soo jiido wadada kana dhigaysa waddada aan loo dhigin. By fasax Eebe, waxaan ka dhigi karnaa wadada ka baxsan dhagax. Waxaan ka gudubnaa buuraha iyo tunnelka iyo badaha adoo leh buundooyinka. Waxan oo dhan u sameeynaa jacaylka cibaadada, jacaylka waddanka, qaranka. Ilaahay ha ka farxiyo dhammaantiin, iyo meesha odayada Karayoolka ah ee u gudubtay daa'in, waa inay ahaadaan samada, oo waxaan ku xusuustaa naxariis. Sida ku cad aragtida iyo hoggaaminta Madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkiga, waxan samaynay wixii aan horey loogu sameynin taariikhda gaadiidka ee dalkeenna. Waan sii wadi doonaa inaan sidaas yeelno. Waxaan leenahay hadafyo waaweyn iyo fikrado. Waad mahadsantihiin Ilaahay waanu kugula wadaagnaa sidaan oo kale waanu sii wadi doonaa. Waxa aan ku sameyno waddooyinka weyni waa il adag oo naga mid ah. Maanta gobollada ee qayb kasta oo ka mid ah dalka Turkiga, in laamaha, kumanaan ka shaqeeya goobaha dhismaha, tobanaan kun oo saaxiibadeena, waxay leeyihiin kaalin muhiim ah xaqiijinta mashruucan, qandaraaslayaasha iyo qandaraaslayaasha labaad our. Waxaan jeclaan lahaa inaan fursaddan ka faa'ideysto si aan idiinku mahad naqno, gacaliyahayaga Karayolcu, dadaalkiina uga yimid qorshaynta, naqshadeynta, dhismaha iyo dayactirka waddooyinkeena. Caddadkayagu waa culus waana sii wadaynaa inaan si taxadar leh u shaqeyno si aan u gaarno dejinta muhiimka ah ee dalkeenna si aan u gaarno yoolalka muddada dheer. Waxaan ku guuleysan doonaa dhamaystirka mashaariicda hadda jira iyo hirgalinta mashruuc cusub H TURHAN, horumarinta dalka, horumarinta qaranka iyo Jamhuuriyadda 100. Sannadkii la soo dhaafay si loo gaaro hadafyada iyo dadaalka ay wadaan ayaa sii wadi doona in ay wada muujiyaan oo dhan, isla markaana sheegay in bisha bisha barakaysan ee Ramadaan ee qaranku uu rajeynayo nasiib wacan.
Manisa TSO Halkalı Wuxuu ka qayb galay xafladaha aasaasiga ah ee Agaasinka Ganacsiga
Wasiirka Elvan Siirtte ayaa ka qayb galay shirkii Agaasimaha Gobolka ee Wadooyinka
Hagaajinta Qaab-dhismeedka Hay'adaha Agaasinka Guud ee Shuruucda Tareenka
Hagaajinta Qaabdhismeedka Hay'adeed ee Mashruuca Maareeyaha Tareenka Guud ...
Maamulaha Guud ee Turki Rize'da ayaa helay
Wasiirka Turhan, Gumushane Iskudhufay Shidaal Furan ee Khudradda
Wasiirka Turhan wuxuu ka qaybgalay Garoonka Diyaaradaha ee Istanbul
Wasiirka Turhan wuxuu ku soo dhaweeyay xaflad saxiixa heshiiskii Tifaftirka Tareenka ee Baku-Tbilisi-Kars
Hadalka Agaasimaha Guud ee Wadooyinka
Sawireynta rinjiyeynta Xarunta Daryeelka Xannaanada iyo Daryeelka Carruurta ee TCDD iyo Waxqabadka Waxqabadka
Xaaladda hadda jirta ee garoonka diyaaradaha ee Esenboğa